Ahoana ny famelana ny mpanjifa hitarika ny fanentanana manaraka | Martech Zone
Alakamisy, Desambra 16, 2010 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia nametraka Ooma izahay - vahaolana VOIP ho an'ny orinasa kely na orinasa kely. Tena mahavariana izany - na ny fampidirana ny Google Voice (izay nomeraon-telefaona orinasanay). Androany, nahazo ity mailaka ity izahay ary tiako be avy hatrany.
Io fanontaniana io ihany no fanontaniana ilainao hapetraka amin'ny mpanjifanao raha ny fahafaham-po no resahina. Rehefa mametraka ny lazany manokana ny mpanjifanao mba hanoroana ny orinasanao dia fantatrao fa manao asa tsara ianao.
Ny fanadihadiana tokana toa an'io dia mifandraika indrindra ihany koa amin'izao fotoana izao… Tsy manam-potoana handinihana amin'ny antsipiriany sy hamaliana fanadihadiana lehibe aho. Raha vantany vao nanindry ianao tamin'ity fanadihadiana ity, dia nentina tany amin'ny pejy fandraisana ianao tamin'ny fivarotana 1 ka hatramin'ny 10 ary saha roa tsy voatery ho an'ny mpivady ho an'ny mombamomba anao
Vantany vao vita ny fandefasana ny fanadihadihana nataonao, dia tonga amin'ny pejy fandraisana fanampiny ianao:
Mamiratra! Ity pejy fipetrahana ity dia mampiditra sosialy hizarana tolotra manokana amin'ireo namanao. Vao avy nilaza ianao fa hanome sosokevitra azy… izao i Ooma dia mangataka anao handroso ary hanao izany. Ity dia iray amin'ireo mailaka tsotra indrindra sy namboarina tsara indrindra, pejy fipetrahana ary fanentanana tafiditra amin'ny fiaraha-monina hitako.
Notarihan'ny Zuberance, izay manana ity fanambarana iraka manaraka ity:
Ny media sosialy dia hery matanjaka tsy azo sakanana izay nanova ny varotra. Ny iraka ataontsika ao amin'ny Zuberance dia ny ahafahan'ny mpivarotra mampiasa ny herin'ny media sosialy hitarika fitarihana, fifamoivoizana ary fivarotana mahay. Izahay dia manao izany amin'ny alàlan'ny fanomezana sehatra mpivarotra haitao mahery vaika ny mpivarotra mba hanamora ny fidirana sy hanomezana hery ny Mpisolovava amin'ny marika Facebook, Twitter, LinkedIn, Amazon, Yelp, tranokalan'ny marika, fitaovana finday, sy maro hafa.